Wamkelekile kwiZIBO YUNFENG INDUSTRIAL CERAMICS CO., LTD
Iimveliso zeAlumina zeramic zinokubakho kwintengiso enkulu
Kwishishini lamachiza lale mihla, intsimbi kunye namanye amashishini, zihlala zisebenzisa oomatshini ohlukeneyo kunye nezixhobo. Ezi zixhobo zidlala indima ebaluleke kakhulu, kwaye amandla omntu awathelekiseki.Njengoko sonke sisazi, izinto ezininzi kwimveliso yezorhwebo ziyonakalisa. Ukuba umatshini wenziwe ngentsimbi emsulwa, ...
Intshayelelo kunye nokusetyenziswa kwento yokuncamathelisa i-ceramic
Ukunxiba i-ceramic adhesive enxitywayo kukwabizwa ngokuba kukuncamathela kwe-ceramic adhesive, ukunxiba-ukuxhathisa i-ceramic tablet. Ibhekisa kuhlobo lokuncamathela kokusebenza okuphezulu ngokukodwa okusetyenziselwa ukunamathela iphepha le-ceramic elinxibayo okanye ibhodi ye-lining kumphezulu wezixhobo zesiseko sokunxiba -...
Umsebenzi omninzi, udidi oluninzi, uninzi lwee-alumina ceramics
Iiceramics zeAlumina ngokomxholo weAl2O3 zahlulwe zayi-99 porcelain, i-95 porcelain, i-92 porcelain kunye nezinye iintlobo, ngamanye amaxesha umxholo weAl2O3 kwi-80% okanye i-75% ikwahlelwa njengothotho oluqhelekileyo lwee-alumina ceramics. Phakathi kwazo, izinto ze-99 ze-alumina porcelain zokuvelisa i-temp ephezulu ...
Ukugcinwa kwephepha lokucoca iphepha / incwadana yokucoceka kwephepha
Imiyalelo kunye namaNqaku oSetyenziso: 1. Phambi kokuba uqalise umatshini, jonga ukuba imibhobho igudile na nokuba indawo yokuthambisa neyokuphuma yombhobho wesebe yesecoca isicoca ivulekile. 2. Vula ivelufa yokukhutshwa kwe-slag ukwenza ukukhutshwa kwe-slag kugude. 3. Vula isixhobo esitsibayo ku f ...
Ukulungiswa kweCeramic iintlobo ezine zeendlela
Kukho iindlela ezine eziqhelekileyo zokwenza iiceramic: ukugaya, ukucoca, ukucubungula i-ultrasonic kunye ne-laser processing. Le Yunfeng yodongwe ilandelayo ukuze ukwazise, ​​iindlela ezahlukeneyo zokwenza iseramikhi yindlela yokwenza. Okokuqala, besila: luhlobo lwenkqubo ukuphumeza thinning ngokukhawuleza, u ...
Ziintoni iimpawu zealumumina yodongwe ityhubhu?
Alumina ityhubhu yodongwe luhlobo lwe-alumina (Al2O3) njengeyona nto iphambili yodongwe, enokusetyenziselwa i-aerospace, izixhobo zomkhosi. Ngaba isetyenziswa ngokubanzi yodongwe, ngoku ukuba wonke umntu azise iingenelo zealuminum yodongwe ityhubhu ngokweenkcukacha. 1. Uzinzo olulungileyo lwealuminium yodongwe ityhubhu: Alumina ityhubhu yodongwe s ...
Iteknoloji yokubumba exhaphake kakhulu yealuminium alumina
Zininzi iindlela zokwenza i-alumina ceramics, ezinje nge-extrusion, inaliti, ukucinezela okomileyo, ukucofa okutshisayo kunye nezinye iindlela zokwenza. Kule minyaka idlulileyo, uninzi lweetekhnoloji ezintsha ezenziweyo ziye zaphuhliswa ekhaya nakumazwe aphesheya. Iindlela ezahlukeneyo zokwenza zinokuphuhliswa ngokweemilo ezahlukeneyo kwaye ...
Amanqaku ufakelo womoya imela esangweni ivelufa yoxinaniso slag weplishi (okwexeshana zeBlack ukubhobhoza)
Imiyalelo yofakelo lwevalve: 1.Ivalve kufuneka ifakwe ngokolwalathanga lwentolo kwivelufa, ukumisela ulwalathiso lofakelo lwevalve, ivelufa ayinakufakwa kwicala elichaseneyo, intloko yocingo lwevalvu kufuneka ngqo, ubuso bayo bokugqibela kunye ...
Imicimbi yofakelo ecocekileyo efuna ingqwalaselo / indlela yokufaka isicoci se-slag?
Izilumkiso kufakelo lwesisusa sokuthintela ukufakwa: 1. Ngaphambi kofakelo, nceda ujonge ngononophelo ukuba ubungakanani obusisiseko buhambelana nomzobo, kwaye ujonge ukuba uluhlu lokupakisha luyahambelana neempahla. 2. Hlanganisa isibiyeli kunye ne-slag yokukhupha itanki kwi-str ...
Ulondolozo lwe-slag remover
Ulondolozo lwe-slag remover 1. Rhoqo ujongisise ukuba ivelufa yebhola ngaphakathi nangaphandle kwesilayidi iyaguquguquka. 2. Qwalasela ukunxiba kombhobho wokukhupha i-slag kwisebe ngalinye lokwahlulahlula i-slag rhoqo. Ukuba igugile, kufuneka itshintshwe ngexesha. 3. Jonga ixabiso legeyiji rhoqo ...
I-vortex slagger yaqanjwa ngo-1891, kodwa yaqala ukusetyenziswa kwishishini lephepha ngo-1906. Owona mzimba uphambili we-slag ...
Ngelanga elishushu kunye nomxube omangalisayo waseArabia. Silandele iqela lomboniso wephepha iBossing kwiCairo entle. Ukungena eYiputa ngumthendeleko wamehlo, uhambo lwemibongo. Kukho iiphiramidi eziyimfihlakalo, ipharao yakudala ...
Iimveliso Alumina yodongwe babe marke enkulu ...
Intshayelelo kunye nokusetyenziswa kwembonakalo ...